ROM and Device, Lock or Unlock Bootloader!! – Xiaomi Guide
Xiaomi phones လေးတွေဝယ်သုံးကြတယ်။ ဘယ်ဆိုင်မှာဝယ်ဝယ် ဖုန်းဝယ်တဲ့အချိန် ပါလာတဲ့ rom ဟာ China rom နဲ့ဖြစ်ပြီး ဖုန်းက China version device ပါပဲ။ ဒါတွေက နည်းလမ်းပေါင်းစုံနဲ့တင်သွင်းလာလို့ရပြီး ဆိုင်တိုင်းမှာ ရှိနေနိုင်တဲ့ဟာတွေပါ။ Global rom နဲ့ Global devices တွေလဲ ရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့ Xiaomi company က သူ့ official distributors တွေရှိနေတဲ့ နိုင်ငံတွေဆီ တရားဝင်တင်ပို့ပြီး အဲသည် distributors တွေကမှတစ်ဆင့် ဖြန့်ချီရောင်းချတာတွေပါ။ သည်တော့ ကျနော်တို့ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆို အောက်လမ်းကနေဝင်လာတဲ့ China version တွေက ဈေးသက်သာပြီး အခွန်အဆင့်ဆင့်ဖြတ်လာရတဲ့ Global devices တွေက ဈေးအနည်းငယ်ပိုကြီးနေတတ်ပါတယ်။ အဲသည် Market အပိုင်းတွေတော့ ထားလိုက်ပါ။ 😀 😀
China version devices တွေမှာ Global rom တင်သုံးကြမယ်။ အဓိကတွေလုပ်ကြတာတော့ ကိုယ့် အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ app တွေသုံးရာမှာ ပိုအဆင်ပြေအောင် လုပ်ကြတာမျိုးများပါတယ်။ Game ဆော့တာ၊ Facebook ပွတ်တာ၊ ဓါတ်ဖမ်းတာလောက်ကတော့ ဘယ် rom တင်ထားထား အရေးမကြီးလှပါဘူး။ ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ app တွေက GPS location လိုတွေနဲ့ အမြဲ real time sync ဖြစ်နေစေဖို့တို့၊ ဖုန်း screen sleep နေပြီး app ဖွင့်မသုံးနေလဲ Push notifications တွေဝင်လာပြီး ကိုယ့်အလုပ်နဲ့ပတ်သက်တာတွေ သိနေစေဖို့လို့ ဆိုတာတွေအတွက်မျိုးတွေဆို Google services တွေ system ပိုင်းမှာ အသင့်ပါပြီး မြောက်များစွာသော permission တွေကို manually ထူးထွေ ချိန်ညှိနေစရာမလိုပဲ ဟန်ချက်ညီညီအလုပ်လုပ်နေစေဖို့ဆိုတာမျိုးအတွက် Global rom သုံးတာက ပိုသင့်တော်ပါတယ်။
သည်တော့ China devices တွေကို Global rom တင်ရာမှာ ရိုးရှင်းပါတယ်။ Official ခွင့်ပြုထားတဲ့ နည်းလမ်းတကျ တစ်ပတ်လောက် အချိန်ပေးလုပ်လိုက်ရင် အဆင်ပြေပါတယ်။
(၁) Boot Loader Unlock လုပ်ပါ။
(၂) ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် Global fastboot rom ကို ရှာပါ။
(၃) ကွန်ပျူတာသုံးပြီး Mi Flash Tool နဲ့ ( အနည်းငယ်ပိုနားလည်တတ်ကျွမ်းပါက Flash tool သုံးမနေပဲ rom ထဲပါတဲ့ bat file လေးတွေသုံးပြီး ) global rom ကို တင်လိုက်တာပါပဲ။
၂၀၁၈ လောက်ကနေစပြီး Xiaomi ရဲ့ security policy အရ ပြောင်းလဲ လာတာတွေရှိပါတယ်။ အရင်က xiaomi ဖုန်းတွေထုတ်တယ်။ တရုတ်နိုင်ငံမှာ အရင်ဆုံးရောင်းတယ်။ China rom နဲ့ပါပဲ။ အခြားနိုင်ငံတွေဆီတင်ပို့တယ်။ အဓိကကတော့ India ပေါ့။ အဲလိုတင်ပို့တဲ့ Model တွေမှာဆို Global rom ပါထွက်တယ်။ သည်တော့ User အနေနဲ့ ကိုယ့် ဖုန်း model ဟာ China rom, Global rom နှစ်မျိုးလုံးရှိလား၊ ရှိတယ်ဆို ကြိုက်တာ တင်သုံးနေ၊ ရပါတယ်။ Hardware အနေနဲ့ သတ်သတ်မှတ်မှတ်ရယ် မထားဘူးဆိုတဲ့သဘောမျိုး ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ၂၀၁၈ လောက်ကနေစလို့ သူ့ပြည်တွင်းသုံးအတွက် China version, အခြား နိုင်ငံတွေတင်ပို့ဖို့ Global version ဆိုပြီး သတ်သတ်မှတ်မှတ်လေးတွေလုပ်လာပါတယ်။ Hardware အပေါ်မှာကို သတ်သတ်မှတ်မှတ် လုပ်လာတယ်လို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ Specs အနေနဲ့ ထူးကွာတာမျိုးသိပ်မရှိလှပါဘူး။ ဉပမာ တရုတ်မှာ 4G ဆို TD-LTE ကိုပဲ အဓိကသုံးလို့ သူ့နိုင်ငံက operator တွေအကုန်ရဲ့နည်းပညာအကုန်နဲ့ကိုက်မယ့် band တွေ ပါလာမယ်။ အခြားကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေက FDD-LTE ကို အဓိကသုံးတာမို့ အဲသည် Global version တွေမှာ TD-LTE bands တွေ ပါချင်မှပါမယ်.. စသည်ဖြင့် ခြားနားမှုလေးတွေ ရှိချင်ရှိနိုင်ပါတယ်။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် xiaomi က သုံးစွဲသူတွေအတွက် လိုသလို customized လုပ်သုံးခွင့်ပေးထားနေဆဲပါ။ Redmi Note3ထွက်တဲ့အချိန်က စလို့ firmware အလွယ်တင်လို့၊ custom rom တွေ အလွယ်ချိန်းလို့ မရအောင် Boot Loader Lock လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် မိမိဖာသာ နားလည်တတ်ကျွမ်းလို့ customize လုပ်ချင်ရင် လုပ်လို့ရအောင် Boot Loader Unlock လုပ်ခွင့် permission မျိုးပေးထားပါတယ်။ သည်တော့ China devices ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ Global devices ပဲဖြစ်ဖြစ် rom ချိန်းတင်ချင်တယ်ဆို တင်လို့ရပါတယ်။ Boot Loader Unlock တော့ အရင်လုပ်ပေါ့။ ဒါပေမယ့် ချွင်းချက်လေးတွေ ရှိလာပါတယ်။ အဓိကကတော့ 2018 နဲ့နောက်ပိုင်း ထွက်လာတဲ့ devices တွေမှာပါ။
China version or Global version ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ် rom ချိန်းတင်ချင်တယ်ဆို သူ့ မူရင်း Factory default rom type မဟုတ်ရင် Boot Loader ကို Lock ပြန်လုပ်ထားခွင့်မရှိပါဘူး။ အဲဒါ အဓိက အချက်ပါပဲ။
China version နဲ့ China rom ပါလာတာကို Boot Loader Unlock လုပ်မယ်။ Global rom ကို ချိန်းတင်မယ်။ တင်ပါ။ တင်လိုက်တဲ့အချိန်ကနေစလို့ Boot Loader Lock ပြန်မဖြစ်ပါစေနဲ့။ Lock ပြန်လုပ်မယ်ဆိုလို့ မရပါ။ ပြန်လုပ်ချင်ရင် မူရင်း rom type ဖြစ်တဲ့ China rom ပြန်တင်ပါ။
Global version နဲ့ Global rom ပါလာတာကို Boot Loader Unlock လုပ်မယ်။ China rom ပဲ ကြိုက်တာမို့ china rom ပဲတင်မယ်။ တင်နိုင်ပါတယ်။ တင်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီး Boot Loader Lock ပြန်မဖြစ်ပါစေနဲ့။ Lock ပြန်လုပ်မယ်ဆိုပြီး မကြိုးစားပါနဲ့။ Lock အနေအထားနဲ့သုံးချင်ရင် မူရင်း rom type ဖြစ်တဲ့ Global rom ပြန်တင်ပါ။
သည်တော့ BLU (Boot Loader Unlock) လုပ်ပြီး Mi Flash Tool နဲ့ firmware ရေးတော့မယ်ဆို Flash tool option မှာ Clean All ဆိုတာကို သေသေချာချာရွေးပြီးမှ Flash ခလုပ်ကို နှိပ်ပါ။ အဲဒါ အရေးကြီးပါတယ်။ Tool ရဲ့ default option က Clean All and Lock ပါ။ အဲဒါက rom တင်ပြီးတာနဲ့ Boot loader ကို Lock လိုက်တာပါ။ အလိုလို လုပ်သွားမှာပါ။ ကိုယ်က Yes, No လေး ကြည့်ရွေးပေးလိုက်စရာ အချိန်မရပါဘူး။ သည်တော့ China device ကို Global rom တင်ပြီးတာနဲ့ Lock ခိုင်းပြီး reboot လိုက်လို့ ဖြစ်သွားမှာပါ။ အဲလိုဆို ဖုန်းက Recovery ထဲဝင်ပြီး ဘာမှတက်လာမှာမဟုတ်တော့ပါ။ အောက်ပါပုံလေးထဲကလိုပေါ့။
ဒါကြောင့် အောက်ပါပုံလေးအတိုင်း Mi Flash Tool က Option မှာသေချာရွေးပေးထားပြီးမှ rom တင်ဖို့ Flash ဆိုတဲ့ ခလုပ်ကို နှိပ်ပါ။ Tool မသုံးပဲတင်မယ်ဆိုရင်ကတော့ flash_all.bat file ကိုသာသုံးပြီးတင်ပါ။ flash_all_and_lock.bat ကို ယောင်လို့မှ double click မနှိပ်မိစေနဲ့ပေါ့ 😀
ကိုယ့်ဖုန်းက Global device လား၊ China device လားဆိုတာ အလွယ်သိနိုင်တဲ့အရာကတော့ ဖုန်းဗူးခွံမှာ တရုတ်စာလုံး တစ်လုံးမှ မပါရင် Global device ပါ။ တရုတ်စာ အညွှန်းတွေ ရေးထားတာ ပါခဲ့ရင် China device ပေါ့။ အဲလို အလွယ်ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
အထာကျကျလေးစစ်ချင်သပဆိုရင် Xiaomi Product Authentication website မှာ ဝင်စစ်နိုင်ပါတယ်။ ဗူးခွံပေါ်ပါတဲ့ IMEI or Serial or ခဲခြစ် code နံပါတ်လေးတွေ ထည့်ပေးပြီး စစ်လို့ရပါတယ်။
အောက်ကပုံလေးတွေက ကျနော့်ဖုန်း Redmi Note 8 Pro ကို စစ်ထားတာပါ။ ကျနော့်ဖုန်းက China device ပါ။ Global rom တင်သုံးထားတာပါ။ စစ်ကြည့်တာမှာ ဘာဖုန်းလဲဆိုတဲ့နေရာမှာ တရုတ်စာတွေနဲ့ပါ ပြပါတယ်။ Delivery Address ဆိုတာမှာ China လို့ ပြပါတယ်။ Global device ဆို သူတင်ပို့လိုက်တဲ့နိုင်ငံနာမည် ပြမှာပါ။ တရုတ်လိုစာတွေနဲ့ ဘာ model လဲဆိုတာလဲ ပြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ English only ပဲ ပြပါလိိမ့်မယ်။
Settings -> About Phone -> MIUI Version နေရာကနေ rom code ကိုကြည့်ပြီး ဘယ် rom type တင်ထားလဲ သိနိုင်ပါတယ်။ အောက်ကပုံလေးက ကျနော့်ဖုန်း Screen Shot ပါ။
MIUI Global 11.0.2 လို့ ပါလို့ Global rom မှန်းသိသာပါတယ်။ China rom ဆို MIUI 11.0.2 လို့ပဲ ပြပါတယ်။ သူ့ Rom Code မှာတော့ (မျဉ်းဝါတားထားတာ) နောက်ဆုံး နှစ်လုံး XM ဆိုတာ ဖယ်လိုက်ပါ။ ဖုန်းတိုင်းပါမှာပါ။ XiaoMi လို ဆိုလိုချင်တာနေမှာပါ 😀 သူ့ရှေ့နှစ်လုံးက ID ဆို Indonesia rom ပါ။ ၂၀၁၈ နဲ့သူ့နောက်ပိုင်းထွက်ဖုန်းတွေမှာ Export လုပ်တာပေါ်မူတည်လို့ Global rom အမျိုး အစားလေးတွေ ကွဲလာပါသေးတယ်။ သည်တော့ နောက်ဆုံး နှစ်လုံး XM ရှေ့က နှစ်လုံးဟာ..
IN – India rom
ID – Indonesia rom
EEA – For EU Countries
MI – All other global countries
အဲသည်လို မှတ်သားနိုင်ပါတယ်။ CN နဲ့ ကျန်တာတွေ (Global) ဘာကွာလဲကတော့ အကြမ်းဖျဉ်းရှင်းပါတယ်။ CN မှာ Google services တွေ မပါဘူးပေါ့။ ကျန်တာက Global rom ဖြစ်လို့ Google services အကုန် system built in ပါပါတယ်။ Region code လေးတွေပေါ်မူတည်လို့ cust app လေးတွေ ပါတာ အနည်းငယ်ကွာသွားတာပေါ့။ Google အဆင်ပြေပြေသုံးဖို့အတွက်ကတော့ အားလုံး အိုကေပါတယ်။ MI နဲ့ဟာမှတော့ Themes ထဲမှာ Font ဒေါင်းဖို့ မပါဘူးပေါ့.. ( Eng type face only ဆိုလိုတာပါ။ မြန်မာစာလုံးပုံစံတွေ မဆိုလိုပါ 😀 )။ IN – India မှာဆို Font နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပါမယ်ပေါ့ .. စသည်လေးတွေ ကွာခြားတတ်တာမျိုးပါ။
လူကြီးမင်းတို့ဖုန်း model အတွက် အထက်ပါ rom type အကုန် ထွက်မယ်၊ ရမယ် မဆိုလိုပါဘူး။ ဒါက xiaomi marketing policy အရ သူပို့တာအပေါ်ကွာပါလိမ့်မယ်။ လူကြီးမင်းဖုန်းအတွက် CN, MI ဆိုပြီး China, Global rom နှစ်မျိုးပဲ ရှိနေတာလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်မှာပါ။ Mi 5X, Mi 6X လို လုံးဝ export မလုပ်ဘူးဆိုပြီး policy ရှိလို့ CN ဆိုတဲ့ China rom တစ်မျိုးထည်း ရှိတာမျိုးလဲ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နေမှာပါ။ ကျနော့် Redmi Note 8 Pro အတွက်တော့ အထက်ပါ rom type အမျိုးအစား အကုန်ရပြီး အကုန်တင်လို့ရပါတယ်။
Global device ကို Global ROM တွေတင်ထားမယ်ဆို Boot Loader Lock ပြန်လုပ်ချင်ပါကလည်း လုပ်နိုင်ပါတယ်။ EEA (EU), MI, IN, RU, ID
Global device ကို China rom တင်ထားတယ်ဆို Boot Loader Lock ပြန်မလုပ်ပါနဲ့။
China device ကို China rom တင်ထားတယ်ဆို Boot Lock Lock ပြန်လုပ်ချင်ပါက လုပ်နိုင်ပါတယ်။
China device ကို Global rom တွေတင်ထားရင် Boot Loader Lock လုံးဝပြန်မလုပ်ပါနဲ့။ ( ဒါ အဓိက မှတ်ရမှာပါ။ သည်မှာက China device တွေပဲ ဝယ်သုံးဖြစ်မှာများပြီး Global rom ချိန်းမယ်ဆိုတာပဲ လုပ်ကြတာများမှာကိုး ) EEA (EU), MI, IN, RU, ID
အခုလောက်ဆို ROM အမျိုးအစားတွေအကြောင်း၊ ဘယ်လိုပုံစံတင်ရမယ်ဆိုတာအကြောင်း၊ Boot Loader နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိထားရမယ့်အကြောင်းလေးတွေ သိနိုင်ပါပြီ။
ROM ချိန်းသုံးမယ်စဉ်းစားပြီး Boot Loader Unlock ဖို့ ဖုန်းမှာ Mi Account လေးတစ်ခုဝင်မယ်။ လိုအပ်တာပြင်မယ်။ Unlock tool နဲ့ သတ်မှတ်အချိန်မှာ ဖုန်းမှာ ဝင်ထားတဲ့ Mi Account နဲ့ Login ဝင်ပြီး Unlock လုပ်လိုက်မယ်ဆိုရင် 100% success ဖြစ်ပြီး Unlock ဖြစ်ပါပြီ။ အဲသည်အချိန်မှာ ဖုန်းက Android Version 8.1 နဲ့သူ့အထက်ဖြစ်မယ်ဆို Factory Reset ဖြစ်မယ်။ ပြန်တက်လာမယ်။ Mi Account Password ဝင်ခိုင်းမယ်။ Normal အတိုင်းဖြစ်မယ်ပေါ့။ ပြီးတာနဲ့ Mi Flash Tool နဲ့ ကွန်ပျူတာမှာ rom တင်ဖို့ပြင်ဆင်မယ်။ ဖုန်းကို fastboot mode ဝင်မယ်။ rom flash မယ်။ rom အသစ်နဲ့တက်လာမယ်။ ဒါတွေက ကျနော်တို့လုပ်လေ့ရှိတဲ့သဘာဝပေါ့။ အဲသည်လို Mi Flash နဲ့ရေးတဲ့အချိန် Clean All ပြောင်းရွေးဖို့မေ့ပြီး Clean All and Lock အတိုင်းထားမိလိုက်လို့ ဖုန်းက post အထက်ဆုံးမှာ ပြသလို မတက်တော့ပဲဖြစ်နေရင် ဖုန်းကို fastboot mode ဝင်ပြီး Boot Loader Unlock tool မှာ ဖုန်းထဲက Mi Account နဲ့ဝင်ပြီး Unlock ထပ်လုပ်လိုက်ရင် Boot Loader Unlock ဖြစ်ပြီး ဖုန်းတက်လာပါလိမ့်မယ်။ ဖုန်းတော်တော်များများ အဲလိုပုံစံအတိုင်း အဆင်ပြေတာများပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ စဉ်းစားကြည့်ရင် အစကတည်းက Mi Account တစ်ခု ဝင်ပြီး Developer Option မှာ Bind လို့ BLU ဖို့လုပ်ရတယ်။ အချိန်ကြရင် Unlock tool မှာ အဲသည် Mi Account နဲ့ပဲ ဝင်ပြီး Unlock လုပ်ရတယ်။ ရလာတော့ Mi Flash နဲ့တင်တယ်။ Clean All ရွေးဖို့မေ့သွားလို့ ဖုန်းမတက်ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲသည်အချိန် အစကတည်းက လုပ်လာတဲ့ Mi Account က ဖုန်းထဲက မထွက်သေးပါဘူး။ သည်တော့ BLU လေးကို အဲသည် Mi Account နဲ့ပဲ ထပ်လုပ်ပေးလိုက်ပြီး အဆင်ပြေပြေဖြစ်သွားတာများပါတယ်။
အဲလိုမှမဟုတ်ပဲ BLU ပြီးတာနဲ့ အခုတော့ rom မတင်သေးဘူး.. နောက်မှတင်မယ်.. သုံးနေလိုက်အုံးမယ်ဆိုပြီး Mi Account က ထွက်ချင်လဲ ထွက်လိုက်မယ်။ အသစ်ထပ်ချိန်းချင်လဲ ချိန်းလိုက်မယ်။ ပြီးမှ rom တင်ဖို့လုပ်ရင် Clean All မရွေးမိလို့ ဖုန်းတက်မလာရင် Unlock ပြန်လုပ်ရမှာ အရင် Unlock လုပ်ထားတဲ့ Account နဲ့ ဖုန်းမှာ အခုဝင်နေတာက မတူနေတာ၊ ဖုန်းထဲကဟာက Unlock permission မရသေးတာ.. စသည်ဖြင့် အချက်အလက်မကိုုက်ညီတာအမျိုးမျိုးဖြစ်နေပြီး Unlock လဲ လုပ်မရတော့ရင် EDL (9008 mode) ကနေ firmware ပြန်တင်ဖို့ပဲရှိပါမယ်။ Boot Loader Lock အခြေအနေမှာပြန်တင်ရတာမို့ မူရင်း rom type ပေါ့။ ( သည်မှာ အခြေအနေနဲ့စဉ်းစားမယ်ဆိုရင် China rom ပေါ့။) အဲသည်အတွက်ကတော့ 2018 နဲ့နောက်ပိုင်းထွက် Model များအတွက် Mi Authentication Service Account လိုပါတော့မယ်။ အဲသည်အတွက်ကတော့ အဲသည် Account ရှိတဲ့ Service ဆိုင်များ၊ Service ဆရာများဆီမှာသာ လုပ်မှ အဆင်ပြေမှာပါ။ Patch Programmer files တွေရှိပေမယ့် ကိုယ့်ဖုန်းအတွက် ရှိချင်မှရှိအုံးမှာပါ။ ပြီးတော့ ဖုန်းကို နောက်ဖုုံးဖွင့်တာတွေလဲ လုပ်ရအုံးမှာပါ။ သည်တော့ Go to service က အဆင်ပြေဆုံးပါပဲ 😀
ကျနော် ရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့ 2018 နဲ့နောက်ပိုင်းထွက် Xiaomi Devices များကို‌ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်။ အဲဒါတွေမှာ rom ချိန်းသုံးမယ်ဆို Boot Loader နဲ့ပတ်သက်ပြီး သတိထားပေးပေါ့။
All МI 9/MI9T
Redmi K20/K20 Pro (“davinci, raphael”)
Redmi K30 (“phoenix”)
MI Mix3(“perseus”)
MI 8 (“dipper”)
MI 8 EE, MI 8 Transparent Exploration Edition (“ursa”)
MI 8 SE (“sirius”)
MI 8 Lite, MI 8 Youth Edition (“platina”)
MI 8 Pro, MI 8 screen fingerprint board (“equuleus”)
MI Max3(“nitrogen”)
MI Mix 2S (“polaris”)
Mi Pad4Plus (“clover”)
Redmi Note 5A (“ugg”)
Redmi Y1 Lite (“ugglite”)
Redmi Y2/Redmi S2 (“ysl”)
Redmi5(“rosy”)
Redmi 5A (“riva”)
Redmi6(“cereus”)
Redmi 6A (“cactus”)
Redmi6Pro (“sakura” and “sakura_india”)
Redmi7(“onclite”)
Redmi 7A (“pine”)
Redmi Note 5/Redmi5Plus (“vince”)
Redmi Note5Pro/Redmi Note5AI (“whyred”)
Redmi Note7(“lavender”)
Redmi Note7Pro (“violet”)
ဘာပဲပြောပြော Boot Loader Unlock လုပ်ထားတာသည် မိမိဖာသာ Official rom type အမျိုးမျိုး ချိန်းသုံးချင်လို့၊ TWRP, Root တွေလိုလုပ်ချင်လို့၊ Custom rom တွေ တင်သုံးချင်လို့.. စသည်ဖြင့် ရည်ရွယ်ချက်တွေကြောင့်လုပ်တာဖြစ်လို့ Lock ပြန်ဖြစ်စေတာမျိုး မလုပ်မိစေနဲ့ပေါ့ခင်ဗျာ။ Lock ထားမှာရမယ့် အကြောင်းအရာမျိုး ရှိလာရင်လဲ ကိုယ့်ဖုန်းဟာ Global device လား၊ Chine device လား သေချာသိပြီး ဘယ် rom type ကို တင်ထားမှ lock လို့ရမယ်ဆိုတာ သေချာသိထားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Lock ပြန်ဖြစ်စေဖို့ Error clean နည်းကတော့ ကိုယ့်ဖုန်းနဲ့ Factory rom type ကို Mi Flash tool မှာ Clean all and Lock နဲ့သာ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာ အကောင်းဆုံးပဲ ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ ကိုယ့်ဖုန်းက China device, China rom တင်ထားတယ်ဆိုပြီး data တွေပျက်မှာစိုးလို့ fastboot ကနေ fastboot oem lock command ရိုက်ပြီး အမြန်လုပ်လိုက်တယ်ဆို ကိုယ်က twrp , root, user data decrypt တွေ လိုက်လုပ်ထားချိန် အမြန်လုပ်မိလိုက်ရင် မလိုလားအပ်တာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တာကြောင့် Clean all and Lock နဲ့သာ firmware ပြန်တင်ဖို့ try လိုက်ပါ။
REF: Mi Global Community
Published in Boot Loader Unlock, General Tips and Mi Flash Tool